Saraakiisha ku biirtay Somaliland oo mar hore shaqada laga joojiyay. - Awdinle Online
Saraakiisha ku biirtay Somaliland oo mar hore shaqada laga joojiyay.
December 3, 2019 (Awdinle Online) –Dowlad goboleedka Puntland ayaa shaaciyay in bishii 11-aad shaqadii laga ruqseeyay sarkaal hoggaaminayay ciidamo ku biiray Somaliland oo lagusoo bandhigay degmada Taleex ee gobolka Sool halkaas oo uu ku soo dhaweeyay wasiirka warfaafinta Somaliland.
Taliye Gubadle ayaa xusay Puntland in ay go’aan cad ka qaadatay in ciidamo aan diiwaan gashanayn ay kusii dhex jiraan ciidamadeeda, isagoo intaas ku daray in sarkaalka la ruqseeyay uu doonayay inuu ku shaqeysto waxa loo yaqaano caagadaysi, oo loola jeedo sarkaal mushaar ku qaata ciidamo aan diiwaan gashanayn.
“Ciidan, haddaan la xaqiijin joogistiisa iyo tiradiisa, maalinta uu dagaal dhaco ayaa la tabaa oo ceebtooda banaanka usoo baxdaa, balse haddii la ogyahay tirada kuu joogta, ciidan walba kaalintiisa ayaa muuqanaysa,” ayuu yidhi Gubadle.
Dhawaan ayay aheed markii Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland Cali Axmed Sabarey uu beeniyay in ciidamo katirsan Puntland oo ku sugnaa degmada Taleex ee gobolka Sool ay ku biireen dhinaca Maamulka Somaliland.
Previous articleXukuumadda Oo Bilawday Bixinta Ruqsada Nootaayoyinka:- (Sawiro)
Next articleKulan ku saabsana ka Faa’ideysiga Masharuuca (ILED) oo baydhabo ka dhacay:- (Sawiro)